Indawo yokunethezeka phezu kweBlue Lagoon - I-Airbnb
Indawo yokunethezeka phezu kweBlue Lagoon
Il-Qala, Gozo, i-Malta
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Marcello
U-Marcello Ungumbungazi ovelele
I-suite ekhethekile enegumbi lokugezela langasese e-Luxury villa. Ovulandi abazimele abangu-2 banikeza umbono oyingqayizivele phezu kwe-Comino neBlue Lagoon. I-villa ine-Swimming Pool kanye nengadi enhle. Isidlo sasekuseni seBuffet sifakiwe.
I-villa iyindawo ekahle kakhulu futhi ephumulele, singathanda ukuyigcina injengoba injalo, ukufinyelela endaweni evamile kanye nedamu kunqunyelwe emini futhi izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 azamukelwa.
I-villa iyindawo ekahle kakhulu futhi ephumulele, singathanda ukuyigcina injengoba injalo, ukufinyelela endaweni evamile kanye nedamu kunqunyelwe em…
4.80 (izibuyekezo ezingu-62)
ibhishi eliseduze 800m, isitobhi sebhasi QALA BITTINGIEG 200m
Isikhathi sokudla kwasekuseni yisikhathi esingcono kakhulu sokwabelana ngesipiliyoni sethu se-Gozo Island nezivakashi futhi siphendule yonke imibuzo ezingaba nayo.
UMarcello Ungumbungazi ovelele